Iindlela ezintlanu zeNkampani zeMartech zidlala umdlalo omde ngokunikwa okuLindelwe ngama-28% kwiNdawo yokuThengisa | Martech Zone
Ubhubhane weCoronavirus uye weza nemiceli mngeni yakhe kunye nokufunda kwimeko yezentlalo, eyomntu kunye neyeshishini. Kube ngumceli mngeni ekugcineni ukukhula kwamashishini amatsha ngenxa yokungaqiniseki kwezoqoqosho kunye namathuba okuthengisa aqingqiweyo.
Kwaye ngoku iForrester ilindele ukuba kunokwenzeka Ukuhla kwe-28% kwinkcitho yentengiso Kule minyaka mibini izayo, ezinye zeenkampani ezingama-8,000 + ze-martech zisenokuba (ngokungafanelekanga) zibaleka ukuzixakekisa ngokuzilungiselela.
Nangona kunjalo, into endiyikholelwayo iya kugcina amashishini e-martech ekhula ngexesha lentsalela yalo bhubhane- kwaye yindlela elungileyo yokuhamba ixesha elide- kukuphindaphinda kabini amandla, izixhobo kunye neeasethi ezikhoyo.
Nazi iimbono ezintlanu zokugcina oovimba kunye nokugcina amandla usebenzisa oko sele unayo:
Cima umsebenzi osemva kunye nobuxhakaxhakaIjelo lakho elingaphakathi Marie Kondo, kwaye ubuyele kuluhlu lwakho lwezinto eziza kwenziwa. Okokugqibela jonga ezo zinto zingaphantsi koxinzelelo ezibekwe ecaleni iinyanga, mhlawumbi iminyaka, kodwa zinokuqhuba imveliso ngaphezulu kwexesha elifutshane nelide. Inkampani yethu ibisoloko ikhutshiwe umva izinto kwimisebenzi yokuthengisa, ezemali, impumelelo kubathengi, nakwezinye iindawo ezenza ukuba sisebenze ngakumbi, kwaye sivule namathuba amatsha okukhula.
Mhlawumbi uneziseko zophuculo ezisisiseko osele unomdla wokuzenza kwitekhnoloji yakho. Sebenzisa eli xesha ukulungisa ezona zinto ziphambili ngokubaluleka kwaye uphucule ishishini lakho okanye iimveliso zakho xa ukuthengisa kuqala ukuqala kwakhona.
Ukunciphisa ezinye zeefayile zakho Ityala lombutho: Njengophuhliso lwetekhnoloji xa singena kwityala lobuchwephesha, kwimibutho senza ityala lombutho. Thatha eli xesha ukucacisa kwakhona kunye nokuhlengahlengisa iinkqubo zakho, ucoce, kwaye udibanise idatha yakho ukuze ube nokuqonda okungcono kubathengi bakho, kwiimveliso nakwishishini lilonke. Ukuthatha inyathelo ubuye umva xa iinkqubo okanye utshintsho lwezixhobo likuvumela ukuba uthathe indlela ecocekileyo yokuyila kwakhona inkqubo yakho engundoqo yeshishini. Umzekelo, iqela lethu kutshanje lisebenzise ezethu iqonga ledatha yabathengi (CDP) ukulungiselela, ukuphinda-phinda ikopi, kunye nokucoca yonke idatha yethu yokuthengisa kunye nentengiso kwii-silos, ukuze sikwazi ukuqhuba ukufikelela ngokufanelekileyo, ekujoliswe kuko, kunye ne-ROI engcono.
Yazi itekhnoloji yakhoEmva kokutyala isahlulo esifanelekileyo sohlahlo-lwabiwo mali kwizisombululo zobuchwephesha ezifanelekileyo kwintengiso yakho, kwintengiso, kwi-IT, nangaphezulu, iimfuno kunye nezinye iingxaki zinokuwanciphisa amaqela akho ekusebenziseni ngokupheleleyo amaqonga owahlawulayo. Ukusuka kwi-Slack ukuya kwinkqubo ye-CRM yenkampani yakho oyikhethileyo, sebenzisa eli xesha lokuphumla ukuze ube ingcali kwizixhobo eziphambili kwizixhobo zakho, okanye nzulu ulwazi kwizixhobo ezingaziwayo. Nkqu neenkampani ezinjengeMarketo neMicrosoft zilibona eli thuba kwaye ukwenza uqeqesho oluphambili kwiimveliso zabo zifumaneke simahla.
Gxila kubathengi abakhoyo: Ukuthengisa kungacotha kwaye amathuba ethu okuthengisa ubuso ngobuso aqhelekileyo ancitshisiwe ngexesha lobhubhane (ukutsho nje okuncinci); kodwa, oko akuthethi ukuba izandla zakho zibotshiwe. Njengoko iinkampani zenza uninzi lwezinto esele zinazo, oku kubandakanya abathengi abakhoyo. Brainstorm ngokuthengisa, ukuthengisa, impumelelo kubathengi, kunye nabanye ukufumana iindlela zokuyila zokukhulisa ubudlelwane okanye ukonyusa ukuthembeka kwisiseko sabathengi bakho. Iqela lethu liqale ukudala kunye nokwabelana ngothotho lweevidiyo zokufundisa ukunceda abathengi ukuba bekhululeke ngakumbi kwaye babe nomdla ekusebenziseni izinto ezintsha zeqonga lethu.
Kabini phantsi kwizinto ezintshaUqeshe okona kulungileyo kwaye uvelisa into oyithatha njengeyona ilungileyo. Kodwa, ngaba kungenzeka ukuba abasebenzi bakho, ukuba banikwe ithuba lokuyila izinto ezintsha, banokuphucula iimveliso kunye neenkqubo ngakumbi? Ngexesha lokuphumla, yenze eyona nto iphambili kwinkampani ukutyala imali kwizinto ezintsha. Yazisa i-hackathon ebanzi yenkampani okanye ukhuphiswano lobuhlobo olunika abasebenzi ithuba lokuhlalutya, lokulinga, kunye nokuza nezisombululo ezitsha zohlobo. Inkampani yethu kutshanje ikwenzile oku kwaye yafumanisa ukuba ii-hacks ezimbalwa, imveliso yethu inokuba luncedo ngakumbi kwiqela lethu langaphakathi, nakubathengi bethu ngokunjalo.
Nokuba idlala njani le minyaka mibini izayo, ndiyakholelwa ukuba ubhubhane usikhumbuze- iinkokheli zeshishini kunye nabasebenzi ngokufanayo- ukuba xa kuvela imiceli mngeni, ngokunjalo namathuba. Yintoni enika indawo kula mathuba okuqaqamba yinkcubeko yenkampani ekhuthaza inkululeko, ubuchule kunye nokukhula. Abaqeshwa kufuneka bakhuthazwe ukuba bazame izinto ezintsha emva koko babhiyozelwe ngobuchule kunye nezisombululo.
Nokuba inkampani yakho ithatha njani isigqibo sokwenza uninzi lwento esele inayo- kuba ijolise kwiimveliso zakho, izixhobo, abantu okanye abathengi-eyona njongo iphambili kukukhuthaza inkanuko, nakumaxesha anzima.
tags: CDPukucoceka kwakhona kwephephaukhuphiswanoCRMPhuhlisouqhekezoizisekoezintshaUmsebenzi osemva kwezentengisoInkcitho kwintengisouphawumartechabathengisi beMartechmicrosoftItyala lombuthoTechnology